मेरो आईफोन अनुप्रयोगहरू किन पर्खिरहेका छन् वा अडिएका छन्? यहाँ वास्तविक फिक्स छ! - आईफोन
कसरी एक निजी नम्बर आईफोन बाट कल गर्न को लागी
मेरो आईफोन 5s ब्याट्री छिटो नाली
मेरो आईफोन मेरो एप्पल घडी संग जोडी गर्दैन
कसरी आईफोन x लाई बन्द गर्ने
मेरो आईफोन अनुप्रयोगहरू किन पर्खिरहेका छन् वा अडिएका छन्? यहाँ फिक्स छ।
तपाईं आफ्नो आईफोन अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर तिनीहरू पर्खिरहेका छन्। धन्यबाद, यस समस्याको लागि समाधान सामान्यतया धेरै सरल छ। यस लेखमा, म तपाईंलाई देखाउने छु वास्तविक आईफोन अनुप्रयोगहरूको लागि फिक्सहरू जुन अद्यावधिक हुन पर्खिरहेका छन् , दुबै आफ्नो आईफोन को उपयोग र आईट्यून्स को उपयोग गरीरहेको छ, ताकि तपाईं आफ्नो अनुप्रयोगहरू अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आईफोन प्रयोग गरेर फिर्ता जान सक्नुहुन्छ।
तपाईको आईफोनको इन्टरनेट जडान जाँच गर्नुहोस्
तपाईं अनुप्रयोग स्टोरमा जानु भएको छ, अपडेट ट्याबको भ्रमण गर्नुभयो, र अपडेट वा अपडेट सबै छनौट गर्नुभयो। अनुप्रयोगहरू डाउनलोड प्रक्रिया सुरू गर्न र अपडेट गर्न केहि समय लिनको लागि यो सामान्य हो। तर यदि यो १ 15 मिनेट वा सो भन्दा बढि भइसकेको छ र तपाईंको अनुप्रयोग आइकन अझै पनी 'प्रतिक्षा' शब्दको साथ ग्रेग भएको छ भने केही अनुसन्धान गर्ने यो समय हो।
तपाईंको इन्टर्नेट जडान दोष लाग्न सक्छ। तपाईंको आईफोनलाई अनुप्रयोग अपडेटहरू डाउनलोड गर्न इन्टरनेटमा जडान हुन आवश्यक छ, त्यसैले तपाईं कि त वाइफाइ नेटवर्कमा वा तपाईंको आईफोन क्यारियरको सेलुलर नेटवर्कमा हुनु आवश्यक छ। जडान पनि स्थिर हुनुपर्दछ।
पहिले तपाईको आईफोन जाँच गर्नुहोस् कि यो एयरोप्लेन मोडमा छैन भनेर निश्चित गर्न। त्यसो गर्न, जानुहोस् सेटिंग्स -> हवाइजहाज मोड । हवाइजहाज मोड पछाडि बक्स सेतो हुनु पर्छ। यदि यो हरियो छ भने, यसलाई सेतो बनाउनको लागि टगल ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंको आईफोन हवाईजहाज मोडमा थियो भने, यसलाई निस्क्रिय पार्नाले स्वचालित रूपमा यसलाई तपाईंको पूर्वनिर्धारित सेलुलर र वाइफाइ जडानहरूमा पुनःजडान हुन ट्रिगर गर्दछ।
आईप्याड स्क्रिन खोल्दैन
पुन: जडान गर्नुहोस्, यसलाई एक मिनेट दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरूमा जाँच गर्नुहोस्। अपडेटहरूले डाउनलोड गर्न सुरु गर्नुपर्दछ, एप्लिकेसन आइकनमा र एप स्टोरमा अपडेट अन्तर्गत प्रगति सूचक दिदै। यदि तपाईंले त्यो देख्नुहुन्न र तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अझै पर्खिरहेका छन् भने, हाम्रा अन्य केही फिक्सहरू प्रयास गर्नुहोस्।
लगइन गर्नुहोस् र तपाईंको एप्पल आईडी बाहिर
धेरै जसो अनुप्रयोगहरू तपाईंको आईफोनमा पर्खिरहेका वा डाउनलोड नगर्न अड्किएका छन्, तपाईंको एप्पल आईडीको साथ त्यहाँ एक मुद्दा छ। तपाईको आईफोनको प्रत्येक अनुप्रयोग एक विशिष्ट एप्पल आईडीसँग जोडिएको छ। यदि त्यहाँ एप्पल आईडीको साथ समस्या छ भने, अनुप्रयोगहरू अड्किन्छ।
सामान्यतया, साइन आउट र पछाडि App Store मा समस्या समाधान हुनेछ। सेटिंग्स खोल्नुहोस् र तल स्क्रोल गर्नुहोस् आईट्यून्स र अनुप्रयोग स्टोर ।
त्यसो भए, स्क्रिनको शीर्षमा तपाईंको एप्पल आईडीमा ट्याप गर्नुहोस् र साइन आउट ट्याप गर्नुहोस्। अन्तमा, तपाईको एप्पल आईडी र पासवर्ड पुन: लग ईन गर्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग त्यो एप्पल आईडीको सवाल छ भने, भ्रमण गर्नुहोस् एप्पलको वेबसाइट र त्यहाँ लग ईन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि एक मुद्दा अवस्थित छ भने, केहि यस वेबपृष्ठमा पप-अप हुनेछ।
अनुप्रयोग हटाउनुहोस् र पुन: प्रयास गर्नुहोस्
यो सम्भव छ कि अनुप्रयोगसँग अद्यावधिक गर्ने प्रयासमा एक समस्या आएको थियो। तपाईं यस मुद्दालाई बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ प्रतीक्षामा अवरोध भएको अनुप्रयोगको स्थापना रद्द गरेर र यसलाई पुन: स्थापना गरेर।
तपाइँको आईफोनमा कसरी अनुप्रयोग मेटाउने
त्यहाँ अनुप्रयोग मेटाउन केहि फरक तरिकाहरू छन्। पहिले, कुनै पनि अनुप्रयोग आइकनमा तपाईंको औंला समात्नुहोस् जबसम्म X आइकन आइकनहरूको माथिल्लो देब्रे कुनामा देखा पर्दैन, र तिनीहरूले डगमगाउन सुरू गर्दछ। यदि आईफोन अनुप्रयोगमा पर्खिरहेको एक X छ भने, यसलाई ट्याप गर्नुहोस्, र अनुप्रयोग अनइन्स्टल गर्न प्रम्प्टहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
आईट्यून्सको साथ एप्स मेटाउँदै
यदि तपाईं कालो X देख्नुहुन्न भने तपाईंले अनुप्रयोग अर्को तरिकाले मेटाउनुपर्नेछ। यदि तपाईं आईट्यून्स खरीद गर्न र अनुप्रयोगहरू सिnc्क गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं अनुप्रयोग हटाउन यो प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसो गर्न तपाईको कम्प्युटरमा आईट्यून्स खोल्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस् पुस्तकालय मेनू यो फाइल, सम्पादन, आदि मुनि बारमा अवस्थित छ, यसले संगीत, चलचित्र, वा सामग्रीको अन्य कोटी भन्न सक्दछ।
आईफोन वाइफाइ बटन काम गर्दैन
ड्रपडाउन लाइब्रेरी मेनूमा, छनौट गर्नुहोस् एप्स । यदि अनुप्रयोग एक विकल्प छैन भने, क्लिक गर्नुहोस् मेनू सम्पादन गर्नुहोस् र थप्नुहोस् एप्स सूचीमा।
अनुप्रयोग पृष्ठमा, तपाईंले आफ्नो उपकरणको लागि खरीद गर्नका लागि आइट्यून्स प्रयोग गर्नुभएका सबै अनुप्रयोगहरूको सूची देख्नुहुनेछ। अनुप्रयोगमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् मेटाउन यसलाई तपाईंको लाइब्रेरी र तपाईंको आईफोनबाट हटाउनको लागि।
अब, तपाई आफ्नो आईफोनमा फेरि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनुप्रयोगको पछिल्लो संस्करण अपडेट समावेश गर्दछ जुन अघिल्लो संस्करणमा अपडेट हुन प्रयास गरेको थियो जब यो अडियो।
अनुप्रयोगहरू अन्य तरिका मेटाउँदै
तपाईं पनि एक अनुप्रयोग भण्डारण र iCloud उपयोग मेनू मा मेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पुग्न, जानुहोस् सेटिंग्स → सामान्य → आईफोन भण्डारण । यदि तपाईं तल स्क्रोल गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो आईफोनमा सबै अनुप्रयोगहरूको सूची देख्नुहुनेछ। जब तपाईं एक अनुप्रयोगमा ट्याप गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग प्रतीक्षामा अडीरहेको अनुप्रयोग मेटाउने वा 'अफलोड' गर्ने विकल्प हुन्छ।
के तपाईको आईफोन स्पेस भन्दा बाहिर छ?
कहिलेकाँही, आईफोन अनुप्रयोगहरू पर्खिरहेका छन् किनकि अपडेटहरू डाउनलोड गर्न तपाईंको आईफोनमा पर्याप्त ठाउँ छैन। आईफोन भण्डारणमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईको आईफोनमा कति कोठा उपलब्ध छ र कुन अनुप्रयोगहरूले धेरै मेमोरी प्रयोग गरिरहेका छन्।
निधार मा एक चुम्बन को अर्थ
तपाइँ आफ्नो आईफोनमा खाली ठाउँ खाली गरेर:
तपाईंले प्रयोग नगर्ने अनुप्रयोगहरू मेटाउँदै।
तपाईका फोटो र भिडियोहरू ब्याक अप गर्न आईक्लाउड प्रयोग गर्दै।
लामो पाठ कुराकानीबाट छुटकारा पाउँदै।
अनुप्रयोगहरूमा फाईलहरू मेटाउँदै, जस्तै अडियो पुस्तकहरू, जसले तपाईंको आईफोनमा धेरै ठाउँ लिन्छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो आईफोनमा थप कोठा बनाउनु भएपछि, तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू जाँच गर्नुहोस् जुन पर्खिरहेका छन् वा अनुप्रयोगहरू पुन: स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
फिक्सिंग सफ्टवेयर समस्याहरू
सफ्टवेयर कोड हो जुन तपाईको आईफोनलाई के गर्ने र कहिले गर्ने भनेर बताउँछ। दुर्भाग्यवस, सफ्टवेयर जहिले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन। जब त्यस केस हुन्छ, यो आईफोन अनुप्रयोगहरू अटुट हुनुको कारण हुनसक्दछ अपडेटहरू डाउनलोड गर्न प्रतिक्षा गर्दा।
तपाईको आईफोनमा सफ्टवेयर समस्या सुधार गर्न मद्दतको एक सरल तरीका भनेको फोन पुन: सुरु गर्नु हो। यो छोटो कदमले कति पटक मद्दत गर्दछ तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ!
तपाईंको आईफोन पुन: सुरू गर्न, होल्ड गर्नुहोस् पावर बटन । त्यो तपाईंको आईफोनको माथिल्लो दायाँ तिर छ। स्क्रिन परिवर्तन नभएसम्म यसलाई केहि सेकेन्ड समात्नुहोस्। त्यसो भए, तपाईंको औंलाले भाग भन्छ कि स्लाइड गर्नुहोस् स्लाइड अफ पावर अफ । एक पटक तपाईको आईफोन बन्द भएपछि १० मा गणना गर्नुहोस् र फेरि सुरु गर्न फेरि पावर बटन थिच्नुहोस्।
हार्ड रीसेट प्रयास गर्नुहोस्
यदि एक साधारण रिस्टार्टले सहयोग गर्दैन भने, हार्ड रिसेट प्रयास गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि होल्ड गर्नुहोस् पावर बटन र गृह बटन तल एकै समयमा। जब स्क्रिन परिवर्तन हुन्छ, दुबै बटनहरूमा जानु दिनुहोस्।
आईफोन and र Plus प्लसमा हार्ड रीसेट प्रदर्शन गर्नु केही फरक छ किनकि एप्पल गैर भौतिक होम बटनमा सारियो। जे भए पनि, आईफोन and र Plus प्लसको होम बटनले काम गर्दैन यदि यो खोल्दैन भने!
कडा आईफोन reset वा Plus प्लस रिसेट गर्नका लागि प्रेस गर्नुहोस् र भोल्युम डाउन बटन र पावर बटन होल्ड गर्नुहोस् जबसम्म एप्पल लोगो प्रदर्शनमा देखा पर्दैन, र त्यसपछि दुबै बटनहरू जान दिनुहोस्। तपाईसँग कुन मोडेल छ भन्ने फरक पर्दैन, तपाईको आईफोन एकपटक पुनः सुरु हुने छ तपाईले दुवै बटन रिलिज गर्नु भएपछि!
तपाईको आईफोन सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्
यदि आईफोन पुन: शुरू र हार्ड रिसेटले सहयोग गर्दैन भने, तपाईं आफ्नो आईफोनको सेटिंग्स रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँको सफ्टवेयर सेटि backहरू त्यसरी नै फर्काउँछ जुन तपाइँ तपाइँको आईफोन पाउनुभयो (वा तपाइँको आईफोनको अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करण)।
यो गर्नका लागि जानुहोस् सेटिंग्स → सामान्य → रिसेट। छनौट गर्नुहोस् सबै सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस् र तपाईंको स्क्रीनमा प्रम्प्टहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
यदि यी चरणहरू मध्ये कुनैले पनि मद्दत गर्दैन भने, तपाईं आफ्नो आईफोनको ब्याक अप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यसलाई पुन: भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गर्नका लागि केहि बिभिन्न तरिकाहरू छन्, तर हामी यहाँ प्येट फर्वार्डमा DFU पुनःस्थापन गर्न सल्लाह दिन चाहन्छौं।
किन टच स्क्रीन काम गर्दैन
DFU ले Default फर्मवेयर अपडेटलाई जनाउँछ। यदि तपाईं एक जीनियस बार मा जानुहोस्, यो बैकअप को प्रकार हो र एप्पल मान्छेहरु लाई पुनर्स्थापना हुनेछ। तर केही मद्दतको साथ, तपाईं यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ। केवल यकिन गर्नुहोस् कि तपाईसंग आफ्नो आईफोनमा तपाईले चाहानु भएको सबै चीजहरू सुरक्षित गर्नु भएको छ र तपाईले यसलाई प्रयास गर्नु अघि जगेडा गरिएको छ। त्यसोभए, हाम्रो लेखको भ्रमण गर्नुहोस् कसरी DFU मोड मा एक आईफोन राख्ने, एप्पल तरीका के गर्ने बारे विस्तृत निर्देशनहरूको लागि।
आईफोन अनुप्रयोगहरूका लागि अन्य फिक्सहरू पर्खँदै
यदि तपाईंको जडान ठोस छ भने, तपाईंको सेटिंग्स सही छ, र तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अझै पर्खँदै छन्, समस्या अनुप्रयोग आफैंमा वा एप स्टोरको साथ पनि हुन सक्छ।
तपाईं अनुप्रयोग स्टोरको साथ प्रश्नहरूको साथ अनुप्रयोगको विकासकर्तामा पुग्न सक्नुहुनेछ। केवल जानुहोस् अद्यावधिकहरू ट्याब र प्रतीक्षा गरिरहेको आईफोन अनुप्रयोगको नाम ट्याप गर्नुहोस्। मा ट्याप गर्नुहोस् समीक्षा ट्याब र को लागी तल स्क्रोल गर्नुहोस् अनुप्रयोग समर्थन ।
एप्पल संग एक उपयोगी वेबसाइट राख्दछ तिनीहरूको प्रणाली को स्थिति । तपाईं यो पृष्ठ जाँच गर्न सक्नुहुनेछ समस्या समस्या अनुप्रयोग स्टोरको साथ छ कि भनेर।
आईफोन अनुप्रयोगहरू: अब कुनै लामो स्टक छैन!
तपाईंको आईफोनसँग हुन सक्ने थुप्रै मुद्दाहरू जस्तै, जब तपाईंको आईफोन अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक हुन पर्खिरहेका छन्, तपाईंसँग समस्या फिक्सिंगका लागि बिभिन्न विकल्पहरू छन्। तपाइँको अनुभवको बारे हामीलाई तल टिप्पणी अनुभागमा तपाइँको आईफोन अनस्टक गर्नका बारे बताउनुहोस्।